Umuthi wokugomela waseRussia Sputnik V COVID-19 uvunyelwe ukusetshenziswa okuphuthumayo e-Indonesia
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Izindaba Ezintsha Zase-Indonesia » Umuthi wokugomela waseRussia Sputnik V COVID-19 uvunyelwe ukusetshenziswa okuphuthumayo e-Indonesia
Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Izindaba zikaHulumeni • Health News • Izindaba Ezintsha Zase-Indonesia • Izindaba • Abantu • Ukwakha kabusha • Unomthwalo wemfanelo • I-Russia Breaking News • Ukuphepha • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • Izindaba Ezihlukahlukene
Inhloko Kazwelonke Yezokwelashwa Nokulawulwa Kokudla e-Indonesia uPenny Lukito
"INational Agency of Drug and Food ivume omunye umuthi wokugomela i-coronavirus, uSputnik V, ngoLwesibili, Agasti 24," kusho lesi sitatimende namhlanje kwi-website yeNational Agency of Drug and Food Control kuleliya lizwe.
I-Indonesia igunyaza umuthi wokugoma we-coronavirus owenziwe ngeRussia.
Ukubuyekezwa ngokuphelele kwemithi bekwenziwe.
I-Indonesia kuze kube manje iqophe amacala angaphezu kwe-4,000,000 COVID-19.
AbeNational Agency of Drug and Food Control e-Indonesia bamemezele ngoLwesithathu ukuthi umuthi wokugomela owenziwe eRussia owenziwe ngeSputnik V coronavirus uvunyelwe ukuthi usetshenziswe ngokuphuthumayo ezweni.
"INational Agency of Drug and Food ivume omunye umuthi wokugomela i-coronavirus, uSputnik V, ngoLwesibili, ngo-Agasti 24," kusho isitatimende esikhishwe namhlanje kuwebhusayithi yezwe. Isikhungo Sikazwelonke Sokulawulwa Kwezidakamizwa Nokudla ufunda.
Inhloko yalesi sikhungo uPenny Lukito uthe kubuyekezwe kahle umuthi. Ubuye wengeza ukuthi ukusebenza kukaSputnik V kuma kuma-91.6%.
I-Russian Direct Investment Fund (i-RDIF), nayo ithe i-Indonesia yizwe lama-70 ukwamukela lokhu ISputnik V. Isibalo samazwe agunyaze umuthi wokugoma waseRussia ayizigidigidi ezine, okubalwa kuwo u-50% wabantu emhlabeni.
"I-Indonesia ingelinye lamazwe anabantu abaningi e-Asia kanti ukufakwa kwe-Sputnik V kuphothifoliyo kazwelonke wokugoma kuzohlinzeka ngokusetshenziswa komunye wemithi yokugoma ephephe kunazo zonke futhi esebenza kahle kakhulu emhlabeni," kusho isikhulu se-RDIF.
I-Indonesia kuze kube manje iqophe amacala we-coronavirus angaphezu kwezigidi ezine, ukufa kwabantu abangaphezu kuka-128,000 kanye nokubuyiselwa okungaba yizigidi ezingama-3.6. Iziphathimandla zezwe phambilini zakugunyaza ukusetshenziswa kwemithi yokugoma ye-coronavirus ekhiqizwa yi-Sinovac, iSinopharm, i-AstraZeneca, iModerna ne-Pfizer.